I-Ascension Island iVisa | Isiqithi sase-Ascension eVisa | natvisa.com
Isicelo se-Ascension Island Visa kwi-Intanethi
Isicelo se-Visa sivunywa nguRhulumente wase-Ascension Island. IVisa okwangoku ayinikezelwanga China, Egypt, Belarus, Hong Kong, Iran, Macau, North Korea, Libya, Russia, Syria, Taiwan, Ukraine nase Vietnam. Abahambi abafuna i-visa yokundwendwela e-UK, emva koko bangene e-Ascension Island, baya kudinga i-visa yokungena emininzi kwaye babonise ubungqina bohambo lwangaphandle. Le mfuneko ayimfuneko kwabo bantu babonise ubungqina bohambo lwangaphandle kwiZiqithi zeFalkland.
Iindidi zeVisa zaseAcension Island
Abakhenkethi abakhenkethi Imeyli Iinyanga ze-6 Ukuya kwi-3 yeenyanga enye Faka isicelo ngoku
Ixesha elifutshane kwiShishini eVisa Imeyli Iinyanga ze-6 Ukufikelela kwiintsuku ezingama-14 enye Faka isicelo ngoku
Ixesha elide kwishishini i-eVisa Imeyli Iinyanga ze-6 Ukuya kwi-2 yeenyanga enye Faka isicelo ngoku
ITrans eTVisa Imeyli Iinyanga ze-6 Ukufikelela kwiintsuku ezingama-7 Zodwa okanye Zimbini Faka isicelo ngoku
Ixesha elifutshane kwiShishini eVisa
Ixesha elide kwishishini i-eVisa
Uhambo nangona sisiQithi seAscension
Fika kwisiqithi saseAscension
Abantu abaceba ukutyelelwa kwiSiqithi seAscension kufuneka babe nepasipoti efanelekileyo yokufumana i-visa yeli lizwe. Ipaspoti ifuna ukuba rhoqo kunye ubuncinci iinyanga ezi-6 zokuvumeleka. Ngokomgaqo-nkqubo okhoyo ngoku we-Ascension Island urhulumente, abantu abaphethe iipasipoti zala mazwe alandelayo abayi kunikwa visa - i-Belarus, China, Egypt, Hong Kong, Iran, Libya, Macau, North Korea, Russia, Syria, Taiwan, Ukraine, kunye neVietnam.
Abantwana kufuneka bafumane imvume kuMzali
Ukuba umntwana ufaka isicelo se-Visa ukutyelela Ascension Island ke kuya kufuneka loo mntu abonelele ngamaxwebhu ayimfuneko. Amaxwebhu ayimfuneko ngokwaneleyo ubungqina bemvume oko kunikezelwa ngumgcini osemthethweni okanye abazali babantwana abancinci kuya kubavumela ukuba bahambe.
Ubungqina beengxowa-mali ngexesha lokuhlala
Amaxwebhu ayimfuneko ekufumaneni i-visa yile; Ifoto yomenzi-sicelo, iingxelo zebhanki, fIsivumelwano sengqesho se-ull, iimpepha zokuqhuba, iziqinisekiso iingxelo zekhadi letyala, izatifikethi zemfundo (Ngaphandle kokuba kufuneka ngokukodwa kwi-2B), inshorensi yonyango, hamba uhambo, njl. Ukubonelela ngala maxwebhu kuya kuqinisekisa ukufumana i-visa ngokulula
Kukho inani leendawo zokuhlala enye, eAscension Island. Ukufumana i-Visa ukuya kumhlaba wesizwe weAcension Island, ubungqina bendawo yokuhlala Kufuneka uboniswe, obu bungqina bunokuba yihotele ebhalisiweyo, indawo yokuhlala, i-motel okanye naluphi na olunye ulungiselelo lwendawo yokuhlala oluhlala kuyo, ngexesha lokuhlala kwabo.
Iinkcukacha zeAcension Island E-Visa Iinkcukacha
Esi isenokuba sisiqithi esikwanti kodwa sinika okuninzi kubakhenkethi eso sicwangciso sokuya apho. Iphakathi embindini woLwandlekazi lweAtlantiki kwaye sisiqithi sentaba-mlilo apho imozulu ingachazeki. Ngapha koko, uya kubona kokubanda kunye nokufudumala ngaxeshanye.
Ewe kunjalo, ngaphambi kokuba ucwangcise ukutyelela le gem ifihliweyo kunye nendawo apho kungekho nto inengqiqo khona kubalulekile ukuba nalo lonke ulwazi. Kukho iimfuno ze-visa ekufuneka uzizalisile kwaye khumbula ukuba esi siqithi asiboneleli nge-visa ekufikeni.
Nantsi yonke into oyidingayo malunga nesicelo se-eVisa kunye neemfuno zeAcension Island.
Isicelo se-Visa Island Island
Okokuqala, kuya kufuneka ugcwalise isicelo se-intanethi kwaye isicelo sakho sixhomekeke kuhlobo lwe-visa oyicelayo. Isiqithi seAcension sinikezela iindwendwe zeshishini nge-eVisa, iVisa yabakhenkethi, i-eVisa yengqesho, ikontraki eVisa, iVisa yesayensi okanye yophando, undwendwelo olunye / oluphindiweyo, kunye ne-eVisa exhomekeke emsebenzini.
Nangona kunjalo, inkqubo kunye nokusetyenziswa kwe-intanethi kungaphaya okanye kungaphantsi okufanayo kwezi ntlobo ze-eVisa. Nantsi into oya kuyifuna kwisicelo sakho:
Ukufika kunye nemihla yokuhamba
I-eVisa yeSayensi / yoPhando ifuna ukubonisa imvume yokuphanda
I-visa yeshishini ifuna ukuba ubonise ubungqina benjongo yeshishini lakho kwesi siqithi
Umsebenzi okanye i-eVisa exhomekeke kwingqesho iya kufuna ukuba ubonise umsebenzi wakho
Ikontraki eVisa ifuna ukuba ubonise ubungqina bemvumelwano yakho yengqesho
Nje ukuba isicelo sakho sithunyelwe kwaye usenzile intlawulo yokwenza isicelo kuya kufuneka ulinde ukufumana isiqinisekiso sokuvunywa okanye ukwaliwa kwe-eVisa yakho.
Ukungenisa kwesicelo sokuPosa
Kuya kufuneka ulinde iiveki ezintathu ngaphambi kokuba ufumane ubungqina. Nangona kunjalo, ukuba zininzi ii-visa zokuphononongwa kwangoko uya kuyifumana i-eVisa yakho kwiiveki ezi-6.
I-visa iya kuthunyelwa kuwe nge-imeyile yakho kwaye iya kuba yikhowudi yebha ukuze ungabhideki. Le khowudi ibar inokuthi iboniswe kwabasemagunyeni abafanelekileyo bokufika xa sele ufikile kwisiqithi saseAscension.
I-visa nganye inento esebenzayo kwaye ke le uyenza isicelo iyakuchaza ukuba ungahlala ixesha elingakanani kwesi siqithi.
The khenketho I-eVisa yokungena iyodwa kwaye ungahlala iinyanga ezi-3. Ukuba ufuna ukwandisa eli xesha kufuneka uqaphele ukuba uya kunikwa kuphela xa iimeko zikhethekile. Oku kukwenzelwa abantu abafuna ukundwendwela nje ukuzonwabisa. Nawuphi na omnye umsebenzi awunakwenziwa kweli visa.
The ishishini I-Visa yivisa yokungena enye kwaye ungahlala iinyanga ezimbini. Le Visa ayinakwandiswa ngaphandle kokuba kukho iimeko ezikhethekileyo. Unokwenza kuphela ishishini kule visa kwaye akukho nto inokwenziwa.
The isayensi / uphando undwendwelo eVisa lukwindawo enye yokungena kwaye ungahlala iinyanga ezi-3. Le Visa ilungele abantu abafuna ukuthatha inxaxheba kwizinto ezinxulumene nesayensi, ulondolozo kunye nophando. Ulwandiso lunokwenzeka kule visa. Nangona kunjalo, ngaphambi kokufaka isicelo kufuneka ube nemvume yophando evunyiweyo yi-Ascension Island Conservation Office.
The Yengqesho I-eVisa ayinayo indawo yokuhlala ephezulu. Oku kuxhomekeke kwisivumelwano sakho sengqesho. Nje ukuba isivumelwano siphelile kuya kufuneka ubuyele kwilizwe lakho. Xa ufaka iifayile ezininzi, uyakufuna imvume kwabasemagunyeni abafanelekileyo. I-eVisa exhomekeke kwingqesho yeyabantu abaza kuhamba nomqeshwa okt usapho. Isiqinisekiso sobudlelwane kuya kufuneka sinikezwe kwabasemagunyeni.
The ukuhamba I-eVisa ikuvumela ukuba uhlale iintsuku ezisi-7 de ufumane indiza yokusa kwindawo oya kuyo. Ukuba ufuna ukuhlala ngaphezulu kweentsuku ezisi-7 kuya kufuneka ukhethe i-visa yabakhenkethi.
Zintathu iindidi zekhontraktha ye-eVisas. Ikontraki Ungeniso olulodwa olunobunyani beenyanga ezintathu. Ikontraki B Ungeniso oluninzi olunobunyani beenyanga ezintandathu. Ikontraki uC amangeniso amaninzi anesiqinisekiso sonyaka.
Intlawulo esemgangathweni yazo zonke iindidi zevisa idweliswe ngezantsi (Pound Sterling):
Uhambo olunye - 20
Ukuhamba kabini - 30
Ushishino lwexesha elincinci-65
Ushishino lwexesha elide - 35
Ikontraki uA - 50
Ikontraki B - 80
Ikontraki uC - 100
Undwendwela iSayensi / undwendwele 25
Ukuxhomekeka kumqeshi - 10
Isishwankathelo se-Visa Island Visa
Yiya kuyo yonke into ekhankanywe apha ngasentla kwaye ubone ukuba zeziphi iimfuno ze-visa ofuna ukuzenzela isicelo. Khumbula ukukhathalela onke amaxwebhu akho kwaye uwagcine kunye nawo ukuze ungahambelani nayo nayiphi na imiba ngexesha lokufaka kwakho okanye ekufikeni kwakho. Nje ukuba ufike kwakho kwaye uhlale uya kuhlala egudileyo kwaye ungahluphi.
Ndidinga i-e-Visa yokutyelela iAcension Island?
Uninzi lweendwendwe ezikwiSiqithi seAscension zifuna ivisa yokungena. Akukho "Visa ngokufika" ukhetho nokuba. Abahambi kuphela abaqeshiweyo kunye nabasebenzela uKumkanikazi waseNgilani, kunye nabo baxhomekeke kubo, bakhululwa ekugcinweni kwesiQithi seAVisa ukuya kwisiqithi seAscension ukuba baye kwiAcension Island.
Ngaba ndiyafaneleka ukufaka isicelo seVisa yaseAccino Island?
Abemi abasuka e-Egypt, North Korea, Russia, Belarus, China, Taiwan, Ukraine, Vietnam, Syria, Macau, Libya, Iran, Egypt, North Korea, nase Hong Kong abafanelekanga ukwenza isicelo se-Ascension Island eVisa. Kwaye ukuba uvela kwilizwe elifanelekileyo, qinisekisa ukuba une-eVisa efanelekileyo ngaphambi kokuba uye kwisiqithi saseAscension.
Zeziphi iindidi zeAscension Island eVisa?
Isiqithi saseAscension sineendidi ezisixhenxe zee-visa (ii-visa) ezingabakhenkethi, i-visa yeshishini, i-visa yesayensi / yophando, uhambo / ukuhamba kabini kokuhamba, i-visa yokuqeshwa, ukuxhomekeka emsebenzini kunye nokuhamba ne-visa yosapho, kunye ne-visa yekontraka. Zonke ezi ndidi zeVisa zigubungela iindidi ezahlukeneyo zevisa zokungena izicelo. Ke ngoko, xa ufaka isicelo, qiniseka ukuba ukhetha udidi olukufanele kakhulu.
Irekhodi lam lolwaphulo-mthetho liza kuyichaphazela njani isicelo sam se-eVisa?
Ukuba nembali yolwaphulo-mthetho akusayi kuchaphazela ngqo isicelo sakho se-eVisa. Kufuneka uxele naziphi na iinkolelo osenokuba unazo ngaphambili kwisicelo sakho. Ukuba uthe wasilela ukwenza njalo kwaye uMlawuli wafumanisa ukuba, isicelo sakho se-Visa siyakwaliwa.
Ngawaphi amaxwebhu axhasayo endimele ndiwasingenise nesicelo sam se-eVisa?
Xa usenza isicelo se-eVisa ukuya kwisiqithi saseAscension, kufuneka ugcwalise amaxwebhu afana nefoto yakho (iskena), i-inshurensi yezonyango, uhambo oluya kuyo, imisebenzi yeshishini eneleta evela kumqeshi, kunye nolwazi malunga namalungiselelo akho okuhlala. Ukuba ungaphantsi kweminyaka eli-18 ubudala, kufuneka ungenise ileta evela kubazali bakho eqinisekisa ukuba (umntu) ekuhamba naye kunye nekopi yephepha lolwazi lencwadana yokundwendwela yomzali / yomgcini.
Ngaba sikho isikhokelo sefoto kwi-eVisa yam?
Ifoto oya kuyifaka kufuneka ibe kwifomathi ye-jpeg, kwaye ayifanelanga ukuba yifoto yepasipoti. Into ebaluleke kakhulu kukuba ubuso bakho kufuneka bubonakale ngokucacileyo kwifoto. Iifoto zeqela okanye iifoto ezonakalisiweyo azamkelwa. Ukuba ungenisa ifoto esingayamkeli, sinokuqhagamshelana nawe ukuba uthumele omnye umfanekiso.
Zithini iimeko zokufaka isicelo se-Visa?
I-eVisa inakho okanye ingaze ihambelane neemeko ngokuxhomekeke kuMlawuli. Kuya kufuneka ufake isicelo kwenye i-eVisa ukuba utshintsha umsebenzi okanye umqeshi. Ukuba undwendwela iinjongo zesayensi / zophando, iOfisi ye-Ascension Island Conservative Office kufuneka ikunike imvume evunyiweyo yokufunda.
Iza kuthatha ixesha elingakanani ukufumana iVV yam?
Uninzi lwamaxesha, izicelo ze-Visa ukuya kwiSiqithi seAscension ziqhutywa kwiintsuku ezingama-21. Kubantu abanezicelo ezinzima, inokuthatha ixesha elide, kodwa ayithathi ixesha elingaphezulu kweeveki ezintandathu (6). Amaxesha amaninzi, xa i-visa yomenzi-sicelo ithatha ixesha elide ukuba ivunywe, inokuba ngenxa yesicelo esingaphelelanga okanye amaxwebhu axhasayo.
Ngaba ndingavunyelwa isicelo sam se-visa?
Ewe, ngamanye amaxesha, ezinye izicelo ziyaliwe. Kwaye kwiimeko ezininzi, ukuvunywa kwe-visa kwenziwa ngokokubona koMlawuli. Ukuba ivisa yomenzi-sicelo iyakhatywa, izizathu zokwala zichaziwe kwileta enikezwe lowo ufaka isicelo. Umfaki-sicelo unokufaka isibheno sokwala oko ukuba unqwenela ukwenza njalo.
Ndingayandisela i-visa yam ngelixa ndikwi-Ascension Island?
Ukwandisa i-visa yakho, kuya kufuneka ufake isicelo sokongezwa kweMeko yokuNgena, kwaye ungenise esi sicelo kwiofisi yoMlawuli. Esi sicelo kufuneka singeniswe ubuncinci kwiintsuku ezili-14 ngaphambi kokuba kuphele i-visa yangoku. Qaphela ukuba ukuba ufaka isicelo sokutshintsha udidi lwakho lwe-visa kwelinye, luya kunikwa kuphela kwiimeko ezizodwa.